७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !! – Sanjal Nepal
Homeसमाचार७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !!
December 16, 2020 admin समाचार 1595
७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !! सक्दो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गरौं नेपाल भूगर्भ अध्यता बिदेशी नागरिक स्वर्गीय टोनी हागनले सन् १९५० को दशकमा खिचेका काठमाडौंका विभिन्न भाग र जनजीवनका तस्वीरहरू आज हेर्दा निक्कै अचम्म लाग्छ । उनले काठमाडौँ मात्र हैन नेपालको अधिकांश भूभागमा घुमेका छन् अध्ययन गरेका छन् । त्यस बेला उनले नेपालको प्राचिन दृश्य धेरै कैद गरे । यहाँ हामीले त्यस बखतको केहि चाख लाग्दा फोटोहरु राखेका छौ ।
December 27, 2020 admin समाचार 1678
पछिल्लो समय सामाजिक संजाल टिकटकमा नेपाली विवाहको भिडियोहरु भाइरल हुने क्रम जारी छ । खिरपुरी वाली भनेर एक बेहुलीको भिडियो पनि निक्कै भाइरल भइसकेको छ । यसै बीच गत मङ्सिर २८ गते सम्पन्न भएको ममता
November 25, 2020 admin समाचार 4177
November 11, 2020 admin समाचार 5803